Wai Yan Lin » windows
Microsoft ၏ Network Operating System များသမိုင်းအကျဉ်း (၂)
Windows NT Microsoft ဟာသူ့ရဲ့ Windows for Workgroup ကို Network တွေရဲ့တစ်ခုတည်းသော OS အဖြစ်မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ Windows for Workgroup ကိုထုတ်လုပ်ပြီး တစ်နှစ်အကြာမှာပဲ Microsoft ဟာသူ့ရဲ့ OS အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ဂျူလိုင်လမှာ ဖြန့်ချီခဲ့တဲ့ Windows NT ဟာပထမဦးဆုံး DOS ကိုမှီခိုမှုကင်းတဲ့ Windows Operating System တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Windows NT ဟာ Microsoft ရဲ့အမှန်တကယ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ထားတဲ့ OS ပါ။ ဒါ့အပြင် server နဲ့ workstation အတွက်ဆိုပြီးသီးသန့် ခွဲထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ပထမဆုံး Microsoft…
continue reading 11.11.2007 |4Comments
microsoft, network operating system, windows
Windows ကိုသုံးကြတဲ့လူတွေ Keyboard Shortcut တွေတော်တော်များများကို သုံးတတ်ကြမှာပါ။ အဲဒီထဲကမှ Windows Key နဲ့တွဲသုံးတဲ့ Shortcut လေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ သိသူကျော်သွား မသိသူဖတ်ထားကြပေါ့ဗျာ။ WINKEY + D : Brings the desktop to the top of all other windows. WINKEY + M : Minimizes all windows. WINKEY + SHIFT + M : Undo the minimize done by WINKEY + M…
continue reading 20.04.2007 |0Comment
shortcut keys, windows
Windows For Workgroups Microsoft ရဲ့ Network Operating System တွေမှာ ပထမဆုံးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Version ကတော့ Windows For Workgroups ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း Windows For Workgroups ကို Version ၂ခုထုတ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ ပထမ Version ဖြစ်တဲ့ Windows For Workgroups Version 3.1 ကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လောက်အကြာမှာတော့ Version 3.11 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယ Version ဟာပထမ Version ကိုအသေးစားပြောင်းလဲမှုမျိုးနဲ့ ပြုပြင်မှုအနည်းငယ်သာလုပ်ပြီး ထုတ်လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် သိပ်ပြီးမကွာခြားပါဘူး။ Peer-to-peer…
continue reading 25.02.2007 |0Comment
microsoft, network operating system, technology, windows